About us - Wuxi Yuda heat-exchanger Co., ltd.
Amandla wokushisa amandla omoya
I-gearbox ebanda ngamafutha
Amanzi apholile weKhabhinethi Yesiguquli sangaphandle
Ukupholisa amanzi kweKhabhinethi Yangaphakathi Yokuguqula
Imishini Yokwakha Nobunjiniyela
Samandla futhi Cold nokomisa
Hydrauilc Amafutha Cooler
Imishini Yezolimo Namahlathi
I-Wuxi Yuda heat-exchanger Co., Ltd.
I-Wuxi Yuda heat-exchanger co., Ltd eyasungulwa ngo-2005, eseMashan okuyindawo emaphakathi yedolobha elihle nelivundile laseYangtze ngokuhamba okulula.
Imikhiqizo yethu eyinhloko iqukethe i-aluminium plate-bar heat exchangers, i-oyela epholile ye-air compressor, i-hydraulic oyela cooler, i-radiator ye-hydraulic, i-oyela epholile yokuxuba ukhonkolo nemishini yokwakha, i-3 ku-1 evaporator, i-air dryer cooler, i-auto intercooler nokunye. Okulingene kusuka ku-oyela, amanzi kuya emoyeni. Ezingatholakala kunqwaba yezicelo ezifana ne-turbine yomoya, i-air compressor, uwoyela nokuhlola igesi, imishini yokwakha, ezolimo, amahlathi, ukugudluza umhlaba, ama-hydraulic, i-atuomobile nenjini kadizili. Ku-2016, imikhiqizo yethu inesabelo semakethe engama-60% emkhakheni wamandla wasekhaya wasekhaya futhi ithola ukunconywa okuphezulu kwamakhasimende. Imikhiqizo ka-Yuda ithunyelwe emazweni amaningi, inani lokuthunyelwa kwamanye amazwe lenyuka ngo-15% ngonyaka.
Sine-Vacuum Brazing Furnace esithuthuke kakhulu, imishini yokuwelda ye-argon, i-welder ezenzakalelayo nezinhlobo ezahlukahlukene zemishini ye-Fin Punching. Siphinde sibe nemishini yokuhlola yobungcweti efana nebhalansi yokushisa, ukushaya kwengcindezi, Usawoti Spray Corrosion, ukuhlolwa kokudlidliza njalonjalo. Inkampani izuze izitifiketi ze-ISO9001, CE / PED, TS16949, ISO14001, OHSAS18001, EN15085. Inani lokukhipha lonyaka lifinyelele kumathani ayizinkulungwane ezimbili noma amasethi ayizinkulungwane eziyikhulu.
Sizibophezele ocwaningweni lobuchwepheshe nasekuthuthukiseni imikhiqizo. Manje, sithuthukisa imikhiqizo emisha nobuchwepheshe ngezikhungo eziningana zocwaningo kanye namanyuvesi.
Ngokuzayo, sizothuthukisa ukuncintisana kwethu okuyisisekelo ngokuthengwa kwezinto ezibonakalayo, ukwandise inqubo yokukhiqiza, ukwengeza imishini esezingeni eliphakeme kakhulu yokuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo, ukwandise ukwakheka kobuchwepheshe ukwenza ngcono okuqukethwe kwezobuchwepheshe emikhiqizweni nokwenza ngcono insizakalo yangemva kokuthengisa ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende njengoba kahle.
Siyakuhalalisela ngemfudumalo iWuxi Yuda Heat Exchan ...
Ukugubha iminyaka engu-10
Inkampani yethu ibambe iqhaza ku-2015 Hannover Mess
Cha. 28, Changkang Rd., Mashan, 214092 Wuxi, Jiangsu, China